धन प्राप्त गर्ने सहिलो उपाय के होला भनेर सेच्दैहुनुहुन्छ भने एकपल्ट यो पढ्नुहोस « गोर्खाली खबर डटकम
कुण्डलीको दोश्रो भावलाई धन भाव भनिन्छ । यस भावबाट व्यक्तिको जीवनमा धन र धनको बचत थाहा पाउन सकिन्छ । यसका साथै कुण्डलीको एघारौं घरसमेत आयसँग जोडिएको हुन्छ । यसभावले व्यक्तिको आम्दानी थाहा पाउन सकिन्छ । आर्थिक जीवन बलियो पार्न जन्मपत्रमा दोश्रो र एघारौं घर मजबूत हुनु पर्दछ ।धन प्राप्तीका ७ सरल उपाय
१. कुण्डलीमा शुक्र र बृहस्पतीको स्थिती मजबूत पार्नु पर्दछ ।२. कुण्डलीको दोश्रो र एघारौं भाव तथा यस भावका मालिक ग्रह बलशाली बनाउनु पर्दछ ।३. शुक्रवारको पूजापछि श्रीसूक्त पाठ गर्नु पर्दछ ।४. तुलसीको बिरुवा रोपेर त्यसको नियमित पूजा गर्नुहोस् ।५. घरलाई हमेशा सरसफाईयुक्त बनाउनुहोस् ।६. धनका देवता कुबेरको पूजा गर्नुहोस् ।७. श्रीयन्त्र, महालक्ष्मी यन्त्र र श्री धन वर्षा यन्त्र स्थापना गरी नियमित पूजा गर्नुपर्छ ।- एजेन्सीको सहयोगमा
एक मजदुर थिए नरहरि राई : एक कागजको टुक्राले यसरी रातारात परिवर्तन भयो जीवन
प्रचण्ड–नेपालका कार्यकर्ताले सडकमै पकाए खाना, सडकमै बसेर खाए !